Osolelwa ukushisa indlu ubethukuthele egane unwabu | News24
Osolelwa ukushisa indlu ubethukuthele egane unwabu
KUBOSHWE umsolwa oneminyaka engu-24 ngoLwesine oledlule osolelwa ukushisa ikhaya le ntombi yakhe ehlala eMalende.
Umsolwa uvelile enkantolo yemantshi yaKwaDukuza kanti kulindeleke ukuthi uzobuyela enkantolo ngomhla ka-10 kuMfumfu (October).
Kusolakala ukuthi umonakalo owenziwe umlilo ufika emalini engu-R500 000.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Colonel Thembeka Mbhele uthe umsolwa ubekwe icala lokuthungela umlilo empahleni.
Ngokusho kuka dadewabo wentombi ka msolwa, uNkk Zamanguni Gcabashe, lesi sigameko senzeka ngomhla ka-24 kuMandulo (September). UNkk Gcabashe uthe umsolwa unengane nodadewabo kanti isigameko sokushiswa kwendlu senzeka ngemuva kokuthi umsolwa ethe uthukutheliswe unina wengane yakhe. Uthe umsolwa wafika ekhaya kubo ebusuku ngosuku lwesigameko ethi ufuna unina wengane yakhe kodwa wathola ukuthi unina wengane akekho.
UNkk Gcabashe uthe: “Samutshela ukuthi akekho kodwa uhambe ekuseni ethi uya e-Groutville kuyena ubaba wengane. Emuva kwalokho umsolwa wahamba nengane ngoba yayimkhalela ifuna ukuhamba naye,” kusho yena.
Uqhube wathi emuva kwemizuzu engu-30 umsolwa wabuya ethi ufuna izimpahla zengane yakhe.
Uthe: “Ngathi uma ngehla ngiya endlini esezansi ukuze ngizolanda izimpahla zengane wangilandela saze sangena ngaphakathi endlini. Ngenkathi sesingaphakathi endlini yilapho aqala khona ukukhuluma ngokuthi udadewethu umenza isilima wabe sesabisa ngokuthi uzoshisa indlu,” kusho uNkk Gcabashe. Uqhube wathi waqala ukuthuka ngenkathi umsolwa esakaza umabonakude phansi wabe eseyaphuthuma eyobikela umama wakhe ngalokhu. UNkk Gcabashe uthe: “Ngenkathi mina nomama sibuyela endlini ezansi safica sekune phunga elasenza sasola ukuthi kukhona into eshayo, kodwa umsolwa wabesetshela umama ukuthi uwucishile umlilo futhi angeke esaqhubeka nokuzama ukushisa indlu ngoba ehlonipha umama,” kusho yena.
Uqhube wathi esehambile umsolwa umndeni usulungiselela ukulala kwenye indlu bezwa kuqhuma izinto phandle kanti wathi uma ebuka ngewindi wabona ukuthi indlu esezansi iyasha. Uthe: “Sazama ukusebenzisa amabhakede amanzi ukucisha umlilo kodwa amalangabi ayese makhulu kakhulu. Kwathintwa izicishamlilo kodwa nazo zafika emuva kwendaba njengoba yonke into yasha yangqongqa,” kusho uNkk Gcabashe. Uqhube wathi ngenhlanhla akekho umuntu owayelele kuyona indlu eyasha kodwa umndeni ukhathazeke kakhulu njengoba ulahlekelwe nayizinto ezibalulekile ezifana nezitifiketi zokuzalwa.